आज रविको रिहाइ ?? चितवनका प्रहरी प्रमुख एसपी मिडियामा आइ यसो भने (भिडियो) - Online sakharapur
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/आज रविको रिहाइ ?? चितवनका प्रहरी प्रमुख एसपी मिडियामा आइ यसो भने (भिडियो)
आज रविको रिहाइ ?? चितवनका प्रहरी प्रमुख एसपी मिडियामा आइ यसो भने (भिडियो)
चितवन जिल्ला अदालतले पत्रकार शालिकराम पुडासैनी प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने र युवराज कँडेलको बयान लिइ सकेको छ! अभियुक्त रूकु कार्कीको भने अदालतले आइतबार बयान लिएको थियो, चितवन जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार रुद्रमणि गिरीका अनुसार थुनछेक बहसपछि उनीहरुलाई साधारण तारिकमा रिहा गर्ने, धरौटीमा रिहा गर्ने वा पर पक्षका लागि थुनामा राख्ने भन्ने बारे निर्णय हुनेछ ।
अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणको आधारमा आइतबार लामिछाने, कँडेल र रुकुविरुद्ध चितवन जिल्ला अदालतमा आ त्मह त्या दुरुत्साहन मुद्दा दर्ता भएको हो। प्रहरीले १० दिनको म्यादमा हिरासतमा राखेर अनुसन्धान पूरा गरेपछि आइतबार अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको हो।
यसै क्रममा रवि लामिछानेलाई आइतवार रिहा नगरिएपछि उत्पन्न भएको परिस्थितिलाई चितवन प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपीले घटना सामान्य भएको प्रतिकृया दिएका छन् । उनले रविका समर्थकले प्रहरी कार्यालय माथि ढुँगा मुडा गर्दा दुई जना प्रहरी घाइते भएको बताए !
यो सामान्य कुरा हो यस्तो अवस्थाको सामना हाँमीले सँधै गर्दै आएको हो, उनले भने हामीले आफ्नो सुरक्षाको लागि मात्र बल प्रयोग गरेका छौं । रविका बयान सकिएर थुनछेकको वहस चलिरहँदा उनका समर्थकले भने चितवनमा नारावाजी गरिहरहेका छन् ,उनीहरुले प्रहरीको अनुसन्धानलाई झुटो छानविन भनेका छन् !!
आइतबार सार्वजनीक विदाको घोषणा ! पुरा पढ्नुहोस
महासमिति बैठकमा देउवामाथि नै आक्रामणको प्रयास, कार्यक्रम स्थगित गरि यसरी भागे देउवा (भिडियो)
सुनको भाउ स्थित, चाँदीको भाउ बढ्यो